Ubumnyama nokusa, into ekudala ilindelwe ngaphambili kwiintsika zomhlaba | Uncwadi lwangoku
Ubumnyama nesifingo (2020) sisandulela sokubhengezwa kweetrilogy zeembali zembali Iintsika zomhlaba, Yenziwe nguKen Follet. Sisaga esaqala ngo-1989 ngumbhali wase-Welsh ngokusungulwa kwe Iintsika Zomhlaba (IsiNgesi isihloko). Emva kwexesha, upapasho lwe Ihlabathi elingenasiphelo (2007) kunye Ikholam yomlilo (2017).
Iincwadi ezimbini zokuqala kuthotho ngaphezulu Ubumnyama nesifingo yenzeka eKingsbridge, idolophu eyintsomi eNgilani. Inxalenye yokuqala imiselwe ngenkulungwane ye-997, eyesibini kwinkulungwane ye-VIV kunye ne-prequel ngowama-XNUMX. Ikholam yomlilo igxile kwimbambano yonqulo eyothusa iYurophu ngenkulungwane ye-XNUMX.
1 Iqonga kunye nabalinganiswa bobumnyama kunye nokuKhanya
1.1 Abalinganiswa ebumnyameni nase Dawn, ngokuka Ken Follet
1.1.4 UBhishophu Wystan
2 Izimvo malunga nomsebenzi
3 Malunga nombhali, uKen Follet
3.1 Imitshato kunye nemisebenzi yezopolitiko
3.2 Ukuqala kobomi bakhe boncwadi
3.3 Inkwenkwezi yentengiso yokupapasha
4 Uhlobo lweenoveli zembali zikaKen Follet
4.0.1 Inkulungwane yeTrilogy
Iqonga kunye nabalinganiswa be Ubumnyama nesifingo
Intshukumo de Ngokuhlwa kunye Nakusasa uyabaleka ngeentsuku ezintathu zonyaka wama-997, Ngokupheleleyo Amaxesha aMnyama eBritani. Ngelo xesha, loo ntsimi yayihlala irhangqwe luhlaselo lolwandle lweeViking kunye nolo hlaselo lomhlaba wase-Welsh.
Iploti ineempawu ezintathu eziphambili: imonki, intombazana yaseNorman Omtsha eNgilane nomyeni wakhe kunye nomakhi wesikhephe. Badibana eKingsbridge, apho kufuneka bajongane nobhishophu obawayo onjongo ikukunyusa amandla akhe.
Ubumnyama nokusa ...
Oonobumba be Ubumnyama nesifingo, ngokukaKen Follet
Umbhali utshilo kudliwanondlebe ukuba uRagna ngoyena mlinganiswa amthandayo. Yakhe Uyinzwakazi entle kwaye ekrelekrele kaNorman enobushushu obomeleleyo, utshatile nendoda engenagazi lihle. Ngaphandle kwemvume yabazali, le ntombazana igqiba kwelokuba iye nomyeni wayo eNgilane. Kodwa, xa befika apho, ufumanisa ukuba izinto azikho njengoko wayecinga.
Ungumvelisi wesikhephe onesiphiwo, ethandana noRagna. Kodwa ekubeni ingumfazi otshatileyo, ngokuqinisekileyo ngumtsalane ongenangqondo. Ngaphandle kothando lwakhe olungafunekiyo, u-Edgar akafuni ntuthuzelo komnye umfazi kwaye uyaqhubeka nokulinda ithuba lakhe nenkosazana.
Uyimonki enenjongo ebambekayo: ukuguqula i-abbey yakhe ibe liziko lemfundo elithandwayo kulo lonke elaseYurophu. Ngesi sizathu, Iprojekthi yakhe yobomi ijikeleze ekwakheni ikomkhulu lesikolo sakhe samaphupha kunye nelayibrari yayo kunye nomatshini wokushicilela.
UFollet umchaza "njengelinye lawona manyala angcolileyo endakha ndawenza ... Uza kumcaphukela kakhulu kangangokuba uza kumnqwenelela esona siphelo simbi ”. Ngokuka, ngumntu ongathembekanga, okhohlisayo, obawayo, ozicingela yedwa kwaye akanalo naluphi na uphawu lwenceba. Ke, eyona njongo ye-Wystan kukonyusa amandla akhe kunye nentsapho yakhe nokuba ngubani omthathayo phambi kwakhe, nangayiphi na indleko.
Izimvo malunga nomsebenzi
Njengokuba phantse kuzo zonke iinoveli zembali kaFollet, abagxeki kunye nabaphulaphuli izandla - phantse ngamxhelo mnye - amandla okuloba encwadi. Ukongeza, amaxwebhu anomdla afunyenwe ngumbhali ayabonakala ngenxa yeenkcazo ezineenkcukacha zomgaqo wezopolitiko namasiko elo xesha.
Amagama ambalwa aphikisayo akhalaza malunga nembali engeyiyo, ilayishwe (kucingelwa) ngamacandelo okuhlukumeza angabalulekanga kwisiphumo. Ngokwahlukileyo, olunye uphononongo luchaza ukuba ngokuchanekileyo ezo ndawo zingcolileyo kunye negazi zezona zimele umzuzu ekubekwe kuwo isicatshulwa. Kwakuyixesha elinzima kakhulu.
Malunga nombhali, uKen Follet
UKenneth Martin Follet Wazalelwa eCardiff, eWales, eUnited Kingdom; ngoJuni 5, 1949. Ngexesha lobuntwana bakhe wakuthanda kakhulu ukufunda kuba abazali bakhe, bengamaKristu, bamthintela ekubukeleni umabonwakude nasekuhambeni kwiimuvi. Yena nosapho lwakhe bafudukela e Londres Xa ndandineminyaka elishumi. Apho wabhalisa kwiYunivesithi yaseLondon ngo-1967 ukuze afunde ifilosofi.
Ukugqiba kwakhe ngo-1970, wenza ikhosi yobuntatheli kwaye waqala ukusebenzela i UMzantsi Wales Echo kwidolophu yakowabo. Ebutsheni bowe-1974 waya Ngokuhlwa kweSondlo eLondon, nangona kunjalo, ekugqibeleni akazange aneliseke bubugcisa bentatheli. Ngesi sizathu, uFollet wangena kwihlabathi lokupapasha kwi Iincwadi ze-Everest Kwaye waqala ukubhala amabali akhe okuqala ngasekupheleni kweminyaka yee-70.
Imitshato kunye nemisebenzi yezopolitiko
Ngo-1968, uFollet watshata noMary, owayefunda naye ekholejini eLondon awayehlala naye iminyaka engaphantsi kweshumi. Kamva, Ngo-1984 watshata noBarbara Hubbard (igama lobuntombi), ilungu leLabour PartyUmbutho uFollet onxulumene nawo ukusukela ngo-1970.
Ukuqala kobomi bakhe boncwadi
Ngexesha le-1970s, UFollet wapapasha iincwadi ezisithoba phantsi kwegama elinguSimon Myles, uMartin Martinsen, uBernard L Ross kunye noZachary Stone. Kwi 1978, Isiqithi sesaqhwithi -Utyikitywe ngegama lakhe lokwenyani- yayikukuqala kwinqanaba lomsebenzi wakhe wamanye amazwe Kwiminyaka elishumi elinanye kamva, incwadi yakhutshwa eyenza ukuba ibe yeyona nto ithengiswa kakhulu kwihlabathi liphela: Iintsika zomhlaba.
Inkwenkwezi yentengiso yokupapasha
Ngaphandle kweenoveli zembali, I-Follet iye yaqatshelwa ngokubaliswa kwayo. Kule subgenus yokugqibela, Isitshixo sikuRebecca (1982) Amaphiko okhozi (1983), Intlambo yeengonyama (1986) kunye Iwele lesithathu (1997), zezinye zeencwadi zakhe ezidumileyo. Ngapha koko, bonke banolungelelwaniso lwefilimu kunye nomabonwakude, ngokunjalo Umngcipheko omkhulu (2001) kunye KwiMhlophe (2004).
Uhlobo lweenoveli zembali zikaKen Follet
Iinoveli zembali yombhali waseBritane baneempawu zemeta okanye iintsomi zembali, njengoko bebandakanya abalinganiswa abaphambili abathathwe kwingcinga yabo. Nangona kunjalo, uninzi lwabagxeki bayancoma ukuthembeka kukaFollet kwiziganeko eziyinyani (ezibaliswa ngabalinganiswa abaziintsomi). Ngokufanayo, bahlala benazo Iinkcazo ezineenkcukacha kakhulu kwaye ubanzi kakhulu.
Ngaphandle kwenani elikhulu lamaphepha (ikwakhona kwi Ubumnyama nesifingo) Amabali e-Follet avelisa ukubandakanyeka okuninzi kubafundi. Ezi mpawu zesitayile zinokubonakala kwezi trilogies zimbini zaziwayo zombhali weCardifian: Iintsika zomhlaba y Inkulungwane.
Trilogy ye Le minyaka
Le trilogy Amanani athengiswa kakhulu ajikeleze kwiziganeko ezifanelekileyo zenkulungwane yama-XNUMX. Olu luhlu luqala ngeziganeko ezinxulumene neMfazwe Enkulu kunye nommiselo weSithintelo eMelika (Ukuwa kweengxilimbela, 2010). Emva koko Ubusika behlabathi (2012), ijolise kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi ngelixa Umbundu kanaphakade (2014) igubungela phantse yonke iMfazwe ebandayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Ubumnyama nesifingo